Akhri eedeymaha loo heysto gudoomiyihii hore ee Balcad oo laamaha amaanku raadinayaan – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho – Mareeg.com: Hay’adaha amaanka Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in la raadinayo gudoomiyihii hore ee degmada Balcad Cusmaan Xaadoole, kaasoo loo heysto eedo dhowr ah, islamarkaana dacwad ka dhan ah loo gudbiyey maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya.
Afhayeenka Hay’adaha amniga dowladda Federaalka Soomaaliya, Qaasim Axmed Rooble oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in Cusmaan Xaadoole loo heysto eedeymo dhor ah oo ay ka mid yihiin:
1- Khiyaano Qaran
2- Dagaal hubeysan oo uu la galay dowladda Fedraalka Soomaaliya.
3- Ka hor-imaasho qaranka.
4- Aasaaska falaago hubeysan.
5- Handadaad iyo awood wax ku muquunin iyo arrimo kale.
Qaasim Axmed Rooble ayaa ka codsaday Xeer ilaaliyaha guud ee maxkamada ciidamada qalabka sida ee dowladda Soomaaliya inuu dhaqaajiyo dacwadda ka dhanka ah Cusmaan Xaadoole, kaasoo aan weli gacanta lagu dhigin.
Cusmaan Xaadole oo maleeshiyo taabacsan jimcihii weerar ku qaadeen boolis marayey Balcad, kuna sii jeeday Jowhar, ayaa ku doodaya in dagaalku ku dhacay si kama’ ah.
Munaasabad shalay lagu qabtay lagu qabtay degmada Balcad ayuu xilka kula wareegay gudoomiyaha cusub ee degmadaas Maxamed Maxamuud Maxamed (Saney Taakey), iyadoo uu magaalada ka maqanyahay gudoomiyihii hore Cusmaan Xaadoole.
Cusmaan Xaadoole oo wata rag hubeysan ayaa ku dhuumaaleysanaya dhulka baadiyaha ah ee degmada Balcad, waxaan hay’adaha amaanku sheegeen in la amray in lagu qabto goobtii lagu arko.